Ciidamada Dowladda Ayaa waxaa Isku Soodhiibay Sargaal Katirsan Ururka Al-Shabaab – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Dowladda Ayaa waxaa Isku Soodhiibay Sargaal Katirsan Ururka Al-Shabaab
Wararka ka imaanaya Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo, Koonfurta Somalia ayaa sheegaya in Sarkaal ka tirsanaan jiray Ururka Al Shabaab uu isku dhiibay ciidamada Dowladda ee ku sugan Degmada Baardheere.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Jubbaland ee ku sugan Magaalada Baardheere, ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in Sarkaalkaan uu isku soo dhiibay shalay ciidamada ku sugan Degmadaasi Baardheere, kadib markii uu xiriir la soo sameeyay Saraakiisha.
Faarax Cabdi Casharo oo ka mid ah Saraakiisha Maamulka Jubbaland, ayaa wuxuu sheegay Sarkaalka isa soo dhiibay in lagu magacaaboo Ciise Cabdi Xersi oo loo yaqaan (Ilkacase) wuxuuna ka mid ahaa Saraakiisha Shabaabka ee Zakawaadka ka uruurin jiray Baardheere.
Ilka Case, ayaa wuxuu watay Qori Ak-47, Booshka qasnadaha rasaasta lagu qaato oo ay ku jiraan qasnado xabado ka buuxaan, waxaana lagu soo dhaweeyay Magaalada Baardheere.
Sarkaalkaan isa soo dhiibay ayaa laga soo xigtay inuu ka baxay Ururka Al Shabaab uuna ka tanaasulay fekerkii Shabaabnimada, hadana uu doonaayo inuu si nabad ah ugu noolaado Magaalada Baardheere.
Ciidamada Dowladda oo gacan ka helaayo kuwa Amisom, ayaa Bishii lasoo dhaafay la wareegay gacan ku haynta Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo oo Shabaab muddo fog ay ka talinayeen.
Muddooyinkaan dambe Saraakiil Shabaab ka tirsan ayaa isku dhiibaya ciidamada Dowladda ee ku sugan Gobolada dalka, xilli labo maalin ka hor la sheegay in Baydhabo uu iska dhiibay Sarkaal Shabaab ka tirsanaan jiray.
Ciidamo Amisom aanan ka tirsaneyn oo Dagaalka ka dhanka ah Shabaab ka qayb qaadanaya